यस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ बर्षमा नयाँ योजना ! - यस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ बर्षमा नयाँ योजना !
यस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ बर्षमा नयाँ योजना !
२०७५, २१ चैत्र, 03:49:14 PM
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नयाँ वर्षमा नयाँ योजना गर्ने बुझिएको छ । उनी नयाँ बर्षको अवसरमा २०७६ मा कर्णाली प्रदेश जाने भएका छन् ।
नयाँ बर्षमा कर्णालीमा पुगेर सम्बोधन गर्नेगरि अहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । विकास र समृद्धिलाई सुरुवातदेखि नै जोड दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई मूल मन्त्र बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षमा अहिले भएका आफ्ना सल्लाहकार र सहयोगीको टिमलाई हटाएर नयाँ टिम बनाउने पनि तयारी गरेको उनी निकट उच्च स्रोतले नाम नबताउने सर्तमा बताएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रीहरुको प्रस्तुति पनि चित्तबुझ्दो नभएकोले केही मन्त्रीहरु हटाएर उनीहरुको ठाउँमा काम गर्नसक्ने र आफ्नो ‘स्पिरिट’ समात्न सक्नेलाई ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बाहिर आएको छ ।
त्यस्तै, पार्टीभित्रको एकताको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो,‘पार्टीभित्रको एकता प्रक्रिया टुँगो लगाउनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भिर भएर लाग्नुभएको छ।’
नयाँ बर्षमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ योजनाले अब कस्तो गति लिन्छ, होला भन्ने प्रश्न आमको हो । यी सबै काम गर्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षलाई पर्खिरहेका छन् ।